‘UKhozi FM luzoyikhotha imbenge yomile’
BONGIWE ZUMA | February 10, 2020
BASABISA ngokuthi kuzochitheka izishebo abebehola umkhankaso wokuvotela ingoma yonyaka emsakazweni uKhozi FM.
Izinduna zikamaskandi zithi sezikhathele wukufunwa imali ngabantu abakhipha izishaqane bevotela ingoma ezohlukanisa unyaka ngonyaka odlule.
Bakhala ngokuthi abaholi bomaskandi bebekhempa ubusuku bonke bevota, abanye baze badayisa nezimbuzi benzela ukuthi babe nemali yokuvota, bevotela umculi kamaskandi uNtencane.
Owamisa ukumenyezelwa kwengoma yonyaka U-Owen Ndlovu, usanda kuqopha i-video enxenxa bonke abavota ukuthi bahambe baye kulo msakazo bayofuna imali.
Lokhu kulandela ukuthi ememezele ukuthi ulihoxisile icala abelivulele iSABC, nalapho abefuna khona izigidi njengoba ebethi umbono wokuthi kube nengoma ehlukanisa unyaka, waqhamuka naye.
Induna kamaskandi ehola abalandeli beMfez’emnyama uSya Ntshangase, ithe yaphela nje le nyanga eqaliwe ingamenyezelwa ingoma eyadla umhlanganiso, uKhozi luzoyikhotha imbenge yomile.
“Akungadlalwa ngathi sisetshenziswe ukukhiphisa abantu imali yokuvota bese sisala singacacelwa ukuthi kwenzekani. Besingalali sihlanganisa imali, eGoli izinduna zakhona bekwenziwa izinsuku zokuvota ubusuku bonke,” kusho uNtshangase.
Ngaphandle kwakhe nenduna yabalandeli baMageza Amahle, uNcwadi Mthembu, ithe bayabona ukuthi inhloso enkulu yokufaka omaskandi kwimincintiswano ngokubasebenzisa ukwenza imali ngoba kuyaziwa bayathandwa bazovotelwa kakhulu.
“Sifuna uKhozi okungenani lukhiphe umklomelo kowahamba phambili noma kubuye imali yamavoti,”kusho uMthembu.
Omunye wabaculi abebebhekwe ngabomvu nobezibona naye edla ubhedu, nguMaster KG wengoma ethi Jerusalema ayicula noNomcebo.
“Akufanele lolu daba siluthathe ngemimoya ephakeme ngoba sekwenzekile kodwa kumele kuzona zonke izinqumo bangakhohlakali abantu ababevota,” kusho uMaster KG.
Okhulumela iSABC osabambile, uMmoni Seapolelo uthe njengoba obebamangalele * -Owen Ndlovu eselihoxisile icala, akusekho okungabavimba ukuthi bamemezele owayedle umhlanganiso ngesikhathi kuvotelwa ingoma yonyaka.Uthe lokhu bangakwenza noma yinini.